Koturu Ruvara Maitiro – Matipi Ekusarudza Yakanakisa Kapeti yeImba - Carpet Color Trends
Home » Koturu Ruvara Maitiro – Matipi Ekusarudza Yakanakisa Kapeti yeImba
Koturu Ruvara Maitiro – Matipi Ekusarudza Yakanakisa Kapeti yeImba
Kapeti ndeimwe yekushongedza ayo anenge anenge achigara pamba pese. Saka kuti kusarudzwa kwakanaka, tanga wafunga matipi ekusarudza kapeti yepasi pazasi. Zvakanaka, unoziva here kuti dzinenge dzimba dzose dzinoshandisa kapeti?
Iye zvino, unogona kutarisisa nemamiriro ekunze ekamuri richava rakasiyana nekapeti. Izvo zvakare zvinoenderana nerudzi uye motif yemoto akasarudzwa. Zvinoitika kuti iwe unogona kushongedza imba nyore nyore uchingoshandisa akasiyana makapeti. Unoda kuwana yakanakisa uye yakakodzera mhando yekapeti yeimba? Ngatitarisei matipi pakusarudza kapeti pazasi.
Carpet Colour Inotakura Maonero Iwe
Ndezvipi zvinhu zvemakapeti zvaunoziva? Sezviri pachena, pane zvishanu zvemakapeti zvinhu, iwe unoziva. Dzimwe nguva tinongotenga makapeti sezvatinoda tisina kunyatsoziva kuti mhando ipi. Heano marudzi mashanu emakapeti uye Carpet Ruvara Mhando:
Mavara akapenya ayo asingatenderi anounza kuoneka kwekureruka uye zviri nyore kusanganisa kupinda mukamuri
Ruvara rwakasviba rwunoratidza zvinorema asi zvichinyanya kunaka mukamuri
Mavara akarova kunge yero neyepink anounza ane hupenyu hwakawanda, anofara uye asina kwazvakarerekera kunzwa kune kamuri
Ruvara rweputi runogona kupa simba rekushongedza simba mune chero nzvimbo
Bhuruu inopa fungidziro yeyananiso inodzikamisa uye moyo
Ruvara rutsvuku runomirira eroticism, simba uye chishuvo
Green nuances yemasikirwo inogona kupa mamiriro ekutonhorera, zororo uye kuwirirana kunogona kurerutsa pfungwa
Ruvara chena runopa pfungwa yekuchena, pachena uye yakachena
Iyo nhema dema yakanyatsokodzera kuratidza chimiro chemaonero, kudzika uye chakavanzika chidiki
Kapeti Ruvara Maitiro uye Mhando dzinokodzera neKamuri Rako
Mhedzisiro yekapeti mukamuri haisi kungoita basa rayo kana sekushongedza. Kune iyo yekusarudzwa kweiyo chaiyo kapeti ruvara inonyanya kudikanwa pakuona mamiriro emuchadenga uye basa mushure mekunge yaiswa. Nekuti iyo ruvara rwekapeti iyi inokwanisa kurarama nemhepo uye inowedzera kukosha kukamuri.
# 1: Rudzi rweWool Kapeti
Iwe zvechokwadi unobvumirana kuti iyi imwecheteyo ingori yeiyo yakanakisa zvinhu. Ingofungidzira wakarara pane kapeti yakagadzirwa kubva pamakushe. Wow, zvingave zvakanaka kwazvo. Yakaenzana nekunyaradza kwayo, kapeti yemvere zvechokwadi inodhura. Kunyange ichidhura, heano mamwe mabhenefiti:
Yakanyanya kugadzikana kushandisa
Nzira yekuchenesa makapeti emvere? Zviri nyore, iwe chete unofanirwa kushandisa yekushambidza kana kuchenesa yakaoma.
# 2: Mhando dzeSilika Makapu
Ndiani asingazivi silika? Ichi chinhu chimwe chete chinozopa zvirokwazvo kunyaradza kana ichienzaniswa nemvere. Maumbirwo ayo akapfava anoita kuti silika ive yakasvibirira. Zvino, sei kuchenesa iyi yakanaka kapeti? Zvakafanana nekuchenesa makapeti emvere, silika kapeti inogezeswawo uchishandisa kacombi yekuchenesa.
# 3: Mhando dzePolypropylene Carpet Equipment
Unoda maumburu ekugadzira? Kana zvirizvo, iwe unofanirwa kusarudza mhando yePolypropylene kana PP kapeti. Kunyange yakagadzirwa nezvinhu zvakagadzirwa, iyi mhando wekapeti ine zvinyoro zvinyoro. Sezvo izvi zvakagadzirwa neyekugadzira zvinhu, chokwadi mutengo unokwanisika. Iko kune mutengo, kune mhando yezvinhu.
Izvi zvinoshandawo kune Polypropylene rugs. The mutengo zvakachipa chaizvo kugadzira kapeti nemhando iyi ine zvakati zvikanganiso. Heino iwe enda zvikanganiso:
Ruvara runokurumidza kupera
Kapeti yara inotsvedza nyore nyore
Kunyanya ichi kapeti zvinhu, unogona kuishambidza uchishandisa mvura.
# 4: Mhando dzeNylon Carpent
Iyi mhando yekapeti ine zvakafanana nePolypropylene mhando kapeti. Kufanana kuri mumapeti zvinhu. Kunyange zvakadaro, iyo nylon zvinyorwa ndeye imwe nhanho pamusoro peiyo Polypropylene zvinhu. Izvi zvinogona kunzwiwa kubva pane izvo zvakavezwa semakushe.
Zvakanaka, iyi mhando yekotoni yekotoni ichave yakakodzera zvakanyanya kwauri iwe unofarira mhepo inopenya. Sei? Kazhinji, mhando yekotoni nyati ine mavara anoyevedza. Kuve nemidziyo yakafanana nerudzi rwekare kapeti, nylon kapeti inogona kushambidzwa uchishandisa mvura.
# 5: Mhando dzeSisal Makapeti
Ichi chinyorwa chimwe chinogona kunge chisina kujairika kune vanhu vazhinji. Chii chinonzi sisal zvinhu? Zvinoitika kuti sezita zvarinoreva, iyi imwe yekotapeti zvinhu zvinobva pachigadzirwa chinonzi sisal. Izvo zvakasikwa zvinyorwa zvinoita kuti iyo carpent texture iwedzere kupfuma. Ehezve, izvi zvinoita kuti sisal kapeti yakachengeteka kwazvo kushandisa.
Usamboshambidza sisal kapeti uchishandisa mvura
Ingoshambidza kapeti uchishandisa vacuum cleaner
Zvino ndidzo mhando shanu dzekoturu zvinhu
# 6: Mhando dzeKatape Inomiririra Wood
Uzvitende kana kwete, tekinoroji yehunyanzvi yakapinda zvakare mukapeti. Chiratidzo ndechekuti, ikozvino pane papeti yakafanana nepasi. Ehe, kutaridzika kwetapeti iyi kwakafanana nehuni, marble, uye mamwe akafanana neye ceramics. Kana iwe ukashandisa kapeti senge iyi, zviri nani kuiisanganisa nekushandiswa kwemagirazi akakona mukona imwe neimwe yekamuri.
Sei? Kuvapo kwegirazi kunogona kuvanza nzvimbo iripo. Iyo imba inotaridzika yakawanda uye kapeti inozomira zvimwe.
Nekudaro, zviri zvese nezveKaravhara Ruvara Unoteedzera iwe. Ndinovimba iyi ruzivo rwakakubatsira iwe. Iwe unogona kutanga kuongorora ese carpent mazano neako aunofarira Carpet Colour Magemhu. Saka, Nakidzwa nekushongedza imba yako inodiwa nekusarudza kapeti yakanaka!
Best Paint Color For Kitchen With D
Color Palette For Living Room With